राजधानीमा आजदेखि ग्यास सहज, अतिरिक्त बिक्री केन्द्र सञ्चालन हुँदै ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ९ चैत्र आईतवार १०:१५
राजधानीमा आजदेखि ग्यास सहज, अतिरिक्त बिक्री केन्द्र सञ्चालन हुँदै !
राजधानीमा आइतबारदेखि ग्यासको अतिरिक्त बिक्री केन्द्र (आउटलेट) सञ्चालन हुँदै छ। नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योग संघको सहकार्यमा निम्न र मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले अतिरिक्त बिक्री केन्द्र राख्न लागेको हो। २२ वटा ग्यास उद्योगले बिहान १० देखि ५ बजेसम्म ग्यास वितरण गर्नेछन्। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार कोरोना भाइरसको हल्लासँगै उपत्यकामा बसोबास गर्ने उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गले अत्यधिक संख्यामा खाना पकाउने ग्यासको सञ्चित गरेका छन्। यसले गर्दा निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग र मध्यम वर्ग समयमा सिलिन्डर पाउन सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्।
‘हामीले मागभन्दा दोब्बर परिमाण ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौं। त्यही परिमाणमा उद्योगबाट सिलिन्डर पनि बजारमा गइरहेका छन्। तर निम्न वर्गले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन सकेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘तिनलाई लक्षित गरी संघको सहकार्यमा अवस्था सामान्य नहुँदासम्म अतिरिक्त आउटलेट व्यवस्था गरेका छौं।’ साबिकका डिपो, डिलर र बिक्री केन्द्र पनि पूर्ववत् सञ्चालनमा रहनेछन्।यस्ता आउटलेटबाट उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर साटेर भरिएका सिलिन्डर तत्कालै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तर एकजना उपभोक्ताले एक थान मात्रै सिलिन्डर पाउने व्यवस्था गरिएको छ। निगमले प्रतिसिलिन्डर एक हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
PREVIOUS Previous post: सुदूरपश्चिममा मात्रै भारतबाट एकै दिन १७ हजार बढी नेपाली फर्किए !
NEXT Next post: कोरोना भाइरस लुकाउन सकिँदैन, डब्लुएचओका दुई जना प्रयोगशालामा बस्छन् !